Ebɛn Kwan Do Na Yenya Nyankopɔn Ne Mbra Do Mfaso? | Asɛmpa
1. Ebɛnadze ntsi na nyimpa hia akwankyerɛ?
Ebɛn kwan do na nokwasɛm a ɔwɔ Bible no mu no bɛkã hɛn ma yaayɛ ahwɛyie?​—NDWOM 36:9.
Hɛn Bɔfo no nyim nyansa sen hɛn koraa. Tse dɛ Egya bi a ɔwɔ ɔdɔ no, hɛn Bɔfo no dwen hɛn ho. Bio so, ɔammbɔ hɛn dɛ yɛntwe hɛn ho mfi no ho na yɛnyɛ dza yɛpɛ wɔ hɛn asetsena mu. (Jeremiah 10:23) Dɛ mbrɛ mbofra hia akwankyerɛ fi hɔn awofo hɔ no, dɛmara so na hɛn nyina hia Nyankopɔn n’akwankyerɛ. (Isaiah 48:17, 18) Akwankyerɛ a yenya fi Bible no mu no yɛ akyɛdze a ofi Nyankopɔn nkyɛn.​—Kenkan 2 Timothy 3:16.
Jehovah ne mbra kyerɛkyerɛ hɛn ma yenya akwankyerɛ a oye sen biara wɔ hɛn asetsena mu, na ɔkyerɛ hɛn mbrɛ ndaamba yebotum enya enyigye na akatua a ɔtsena hɔ daa. Osiandɛ Nyankopɔn na ɔbɔɔ hɛn ntsi, ntseasee wɔ mu dɛ ɔhyɛ mbra ma hɛn. Ɔsɛ dɛ yɛkyerɛ n’akwankyerɛ a ofi ɔdɔ mu dze ma hɛn no ho enyisɔ na yɛdze enyigye dzi ne mbrasɛm do.​—Kenkan Ndwom 19:7, 11; Nyikyerɛ 4:11.
2. Ebɛn kwan do na Nyankopɔn n’Asɛm kyerɛ hɛn kwan?
Bible mu nokwasɛm bi kyerɛ hɛn dza Nyankopɔn pɛ dɛ yɛyɛ wɔ tsebea ahorow pii mu. Bi so kyerɛ hɛn dza otwar dɛ yɛyɛ wɔ tsebea ahorow pɔtsee bi mu. (Deuteronomy 22:8) Ɔsɛ dɛ yɛma hɛn adwen mu tsew na ama yaatse dza Bible mu nokwasɛm bi kyerɛ no ase yie. (Mbɛbusɛm 2:10-12) Dɛ nhwɛdo no, Bible no kyerɛkyerɛ dɛ nkwa yɛ akyɛdze a ofi Nyankopɔn nkyɛn. Dɛm nokwasɛm yi botum aboa hɛn amma yaammfa hɛn nkwa anaa obi no nkwa annto esian mu.​—Kenkan Ndwuma 17:28.
3. Ebɛn mbra ebien na ohia paa?
Jesus kãa mbra ebien a ohia paa ho asɛm. Dza odzi kan no ma yehu siantsir a nyimpa tse ase; ɔno nye dɛ yebohu Nyankopɔn, yɛbɔdɔ no na yeefi nokwardzi mu asom no. Ɔsɛ dɛ yesusu mbra a odzi kan no ho wɔ hɛn gyinaesi nyina mu. (Mbɛbusɛm 3:6) Hɔn a wɔdze dɛm mbra yi dzi dwuma wɔ hɔn asetsena mu no nye Nyankopɔn nya anyɛnkofa, hɔn enyi gye paa na wobenya onnyiewiei nkwa.​—Kenkan Matthew 22:36-38.
Mbra a otsĩa ebien no botum aboa hɛn ma yɛnye nkorɔfo aatsena wɔ asomdwee mu. (1 Corinthfo 13:4-7) Dɛm mbra yi a yɛdze bedzi dwuma no hwehwɛ dɛ yebosũasua kwan a Nyankopɔn nye nkorɔfo dzi no.​—Kenkan Matthew 7:12; 22:39, 40.
4. Ebɛn kwan do na yenya Nyankopɔn ne mbra do mfaso?
Nyankopɔn ne mbra kyerɛkyerɛ mbusua mbrɛ wobotum dze koryɛ atsena wɔ ɔdɔ mu. (Colossaefo 3:12-14) Nyankopɔn n’Asɛm san so kyerɛkyerɛ nokwasɛm a ɔbɔ mbusua ho ban, a ɔnye dɛ, awar yɛ nhyehyɛɛ a ɔtsena hɔ daa.​—Kenkan Genesis 2:24.
Yebotum abɔ hɛn honam afamu eyiedzi ho ban na yeenya akomatɔyamu ber a yɛdze Bible nkyerɛkyerɛ dzi dwuma wɔ hɛn asetsena mu no. Nhwɛdo nye yi; mpɛn pii no, edwumawuranom pɛ edwumayɛfo a wɔdze nokwardzi na mbɔdzembɔ a Bible kã ho asɛm no yɛ hɔn edwuma no. (Mbɛbusɛm 10:4, 26; Hebrewfo 13:18) Nyankopɔn n’Asɛm san so kyerɛkyerɛ dɛ, yɛmma hɛn enyi nsɔ dza yɛwɔ na yembu anyɛnkofa a yɛnye Nyankopɔn wɔ no dɛ ɔsom bo sen honam afamu ahonyadze biara.​—Kenkan Matthew 6:24, 25, 33; 1 Timothy 6:8-10.
Yebenya apɔwmudzen ber a yɛdze Nyankopɔn ne mbra dzi dwuma wɔ hɛn abrabɔ mu no. (Mbɛbusɛm 14:30; 22:24, 25) Nhwɛdo nye yi; sɛ yɛdze Nyankopɔn ne mbra a otsia asabow no dzi dwuma a, ɔbɔbɔ hɛn ho ban efi akwanhyia nye yarba ahorow a otum ku nyimpa no ho. (Mbɛbusɛm 23:20) Ɔwɔ mu dɛ nsã nnyɛ Jehovah n’ekyiwadze, naaso sɛ yɛbɔnom a, ɔnnsɛ dɛ ɔbor do. (Ndwom 104:15; 1 Corinthfo 6:10) Nyankopɔn ne mbra kyerɛkyerɛ hɛn ma yɛbɔ hɛn ndzeyɛɛ na nsusui ho ban. Iyi yɛ mfaso kɛse ma hɛn (Ndwom 119:97-100) Naaso, nnyɛ mfaso a nokwar Christianfo nya ntsi na wɔkyerɛ obu ma Nyankopɔn ne gyinapɛn ahorow na mbom, wɔyɛ dɛm dze hyɛ Jehovah enyimnyam.​—Kenkan Matthew 5:14-16.
Nyankopɔn bu nyisen-tugu, bɔgya a wɔgye nye abowa no nkwa dɛn?
Enye Jehovah Adasefo nsusu Bible mu asɛm bi ho, anaa ibotum asɔ hɛn Bible adzesua a yɛyɛ a yɛnngye hwee no ho nhyehyɛɛ no ahwɛ.
Fa mona Fa mona Ebɛn Kwan Do Na Yenya Nyankopɔn Ne Mbra Do Mfaso?